लसग्ना एबर्जिन, मशरूम र ग्रेटिन म्यास गरिएको आलुका साथ | बेजिया
लसग्ना एबर्जिन, मशरूम र ग्रेटिन म्यास गरिएको आलुको साथ
Lasagna भान्साकोठामा हामीलाई धेरै खेल दिन सक्छ। यस प्रकारको पास्ता पानाहरूमा प्रस्तुत गरियो, विभिन्न फिलिंग समर्थन गर्दछ। यी स्लाइसहरूसँग बोलोस्नेस सास इन्टरर्सर्पि .्ग छ परम्परागत तरिका यसलाई तयार पार्न, तर तरकारीको संस्करणहरू जुन हामी आज प्रस्ताव गर्छौं पनि धेरै व्यापक छन्।
आज हामी यसलाई तयार गर्न मौसमी उत्पादन प्रयोग गर्दछौं एग्प्लान्ट संग lasagna र ग्रेटिन मसलेको आलु। एउटा कडा थाल जुन हामी तपाईंलाई धोका दिदैनौं, तपाईंलाई भान्सामा साघुँरो भए पनि समय दिनेछ। परिणाम, हो, यो यसको लायक हुनेछ, हामी तपाइँलाई आश्वस्त गर्दछौं!
तपाईं यस लासग्नालाई सजीलो तरिकाले टमाटर सॉस र व्यापारिक मसलाएको आलुको प्रयोग गरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, समय भएपछि यो अझ धनी र स्वस्थ हुनेछ घरमा दुवै तयार पार्न। अगाडि बढ्नुहोस् र यो नुस्खा बनाउनुहोस् जुन तपाईं शाकाहारी भोजनको लागि अनुकूल गर्न सक्नुहुन्छ केवल शाकाहारीको लागि पनीरको विकल्प प्रयोग गरेर।
14का लागि सामग्री (१xx१cm सेमी मोल्ड)
4 का लागि सामग्री (१xx१cm सेमी मोल्ड)
२० लासग्ना प्लेटहरू
१ सानो एग्प्लान्ट, पासा
१/२ दर्जन मशरूम, रोल गरिएको
ग्रेटेड चीजको १/२ कप
टमाटरको चटनीको लागि
१/२ हरियो घन्टी मरिच, काटियो
Ri पाकेको टमाटर, खुल्ला र काटियो
० रीगानोको १ चम्मच
टमाटर प्यूरीको लागि
Small सानो आलु
१ स्प्याश दूध
टमाटर सॉस तयार गरेर सुरु गर्नुहोस्। यसो गर्नका लागि प्याजमा र प्यारीमा एक चम्मच जैतूनको तेलको एक चम्चाको साथ १० मिनेट सम्म फ्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि, काटिएको टमाटर, मौसम, जोड्नुहोस्, र मध्यम आँचमा पकाउनुहोस् जबसम्म टमाटर पहिले अलग हुँदैन र त्यसपछि मोटो हुन्छ, लगभग minutes० मिनेट। एक पटक सकिएपछि ओरेगानो थप्नुहोस्, मिक्स र रिजर्भ गर्नुहोस्।
टमाटर सॉस पकाउँदा, आलु पकाउनुहोस् धेरै नुनिलो पानीमा। एकपटक पकाएपछि, यसलाई हल्का तताउन पौंला र काँटाले तिनीहरूलाई म्यास गर्नुहोस्। नुन र मरिच, जायफल र दूध को एक स्प्लैश जोड्नुहोस्। चाहिएको बनावट प्राप्त गर्न आवश्यक भए थप दूध थप्नुहोस्।
तेस्रो चरण हुनेछ स्टफिंग पकाउनुहोस्। यो गर्नका लागि करीव १० मिनेट को लागी अयुब्रेजिनलाई अलि तेलले फ्राई गर्नुहोस् र त्यसपछि मशरूमहरू थप्नुहोस्। सिजन, मशरूम खैरो र रिजर्भ नभएसम्म केही मिनेटका लागि पूरै पकाउनुहोस्।
जब तपाइँ भर्ने खाना पकाउन थाल्नुहुन्छ, राख्नुहोस् lasagna प्लेट्स हाइड्रेट गर्न, निर्माताको निर्देशनहरू अनुसरण गर्दै, र ओभन तताउनुहोस्।
सबै कम्पोनेन्टहरू तयारसँग, Lasagna भेला गर्नुहोस्। हल्का हल्का प्यानको तेल ब्रश जैतून तेलको साथ। लासग्नाका दुई प्लेटहरूसहित आधार कभर गर्नुहोस् र त्यसको माथि आबर्जिन भर्नको आधा भाग र टमाटरको एक तह (टमाटरको एक तिहाइ) राख्नुहोस्। अघिल्लो चरण दोहोर्याउनुहोस् Lasagna, टमाटर र म्यास आलु को एक परत संग समाप्त गर्न।
यसको शीर्षमा, चीजको उदार तह राख्नुहोस् र लसग्नालाई चुँडमा लैजानुहोस् धन्यवाद सुनौलो सम्म, लगभग २० मिनेट।
ताजा बनाईएको एबर्जिनका साथ लासग्ना सेवा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » पास्ता » लसग्ना एबर्जिन, मशरूम र ग्रेटिन म्यास गरिएको आलुको साथ
किन वर्षौंको छालाले यसको चमक गुमाउँछ?
Positive सकारात्मक वाक्यांश स्कूल चिन्ताले ग्रस्त बच्चालाई भन्न